Izinwele ze-Keratin ziqondisa ekhaya, iindlela. Ukupheka kwezilwanyana zasemakhaya zokulungisa iinwele zekeratin.
Izinwele zeKeratin ziqondisa ekhaya: izilungiso zobuchwepheshe kunye nokupheka kwabantu
Kungekudala, inqubo yokulungiswa kweenwele ze-keratin ekhaya iye yaziwa kakhulu kubafazi. Kubandakanya ukuphucula iipiliti ngeprotheni-keratin, ejongene nempilo kunye nobuhle. Ngenxa yoko, iinwele azikhangeli nje kuphela, kodwa zifumana ukukhanya kwendalo kunye ne-silky. Ngoko ke, sicebisa ukuba ufunde malunga nendlela yokuqhuba le nkqubo ngencedo lwezonyango zobuchwephesha kunye nabantu.
Izinwele zaseKeratin ziqondisa ekhaya
Inkqubo yokulungiswa nekeratini ekhaya inokwenziwa ngeendlela ezimbini: ngoncedo lwezonyango zobugcisa kunye nokusebenzisa iincwadi zokupheka.
Inketho yokuqala yinkqubo efanelekileyo yokuchitha ixesha, efuna ukubekezela kunye nekhono. Kuye uya kuyidinga: ikiti yokulungiswa kwekeratini, isomisi zentsimbi kunye ne-ironing kunye nolawulo lokushisa okungenani ama-degrees angama-200. Inkqubo yokulungiswa ngokwayo iyahlula zibe zigaba ezintathu. Kwisigaba sokuqala, iinwele kufuneka zihlanjwe nge-shampoo ekhethekileyo, eyazihlambulula kakuhle kuzo zonke izihlambululi kwaye zisuse igrisi. Emva koko intloko kufuneka yomiswe ngeswele. Kwisigaba sesibini, iinwele kufuneka zisetyenziswe kunye ne-agent agent. Kufuneka igcinwe ixesha eliboniswe kwipakethi kwaye ungaqala ukulungiswa ngentsimbi. Ukwenza oku, iinwele zihlulwe ngokucokisekileyo zibe yimigca emincinci engabi ngaphezu kwe-1 cm ubukhulu, kwaye i-ironing i-strand ngasemva kwamaxesha angama-10. Emva kokuba iinwele zihlile, zinokuhlanjululwa. Kwisigaba sesithathu, iimaski ezikhethekileyo okanye iziguliseli zisetyenzisiweyo kwiingqungquthela, ezixhasa umphumo. Kwaye ekugqibeleni benza i-hairdryer.
Ukupheka kweentlobo zeenwele zeekeratti
Kulabo abangakulungele ukulungisa ii-curls ngeendlela zamakhemikhali, kodwa basoloko bephupha ngeenwele ezigqithisileyo kunye ezichanekileyo, kukho iindlela zokupheka zengqondo.
Ngokomzekelo, ukuba izinwele zekeratin ziqondise ekhaya, ungasebenzisa i-aple cider viniga. Kumele ihlanjululwe ngamanzi amaninzi (1: 5) kwaye ifakwe nge-cotton swab ukuze inqabise iinwele. Yomisa intloko yakho ngokwemvelo. Ungenza kwakhona imaski ye-acetic. Ukwenza oku, kufuneka udibanise iipunipoji ezi-2 ze-aple cider iviniga ezine-tablespoons zenye i-oyile yemifino kwaye ungeze malunga ne-100 ml yamanzi afudumeleyo. Umxube obangelwayo usetyenziswe imizuzu engama-30-40, kwaye uhlamba kunye ne-shampoo. Emva kokusetyenziswa rhoqo kwesi siluleko (ubuncinane kanye ngeveki ngenyanga), iinwele ziya kuba zilungele ngakumbi kwaye ziluhlaza.
Ubunki obusikiweyo obusikiweyo ukulungiswa
Ukunyusa okunyanzelekayo kunye nokuqhubekayo kulungelelwano kungafezwa usebenzisa iresiphi kunye nesitashi nobusi.
ubusi bendalo - 1 tbsp. l.
ubisi - 50 ml
Hlanganisa iipunipoli ezimbini ze-ukhilimu omuncu kunye nepunipoon yobusi kunye neqanda elilodwa leqanda.
Yongeza ipoyiji enye yesitashi kunye ne-50 ml yobisi.
Ukutshisa umxube kwindawo yokuhlambela amanzi ukuze ukhulise umncinci.
Nceda nceda! Ukuba i-mask ayifuni, kungcono ukuba ungayitshisi ixesha elide, kodwa ukuyisebenzisa kwifom ye-liquid. Emva kwakho konke, ukuba kuninzi, i-honey and yolk will will lose all their properties. Kwaye ngokuzayo, kongeza isitatshi esincinane.
Ukulungelelanisa imaski yokulungelelana kufuneka kufane ne-shampoo eninzi.
Faka isicelo kumxube, ubeke iplastiki kwaye ubambe imizuzu engama-40. Emva koku kuhlamba kunye ne-shampoo kwaye uyomile.
Iinguqu ezi-6 zokuluka uboya kwizinwele eziphakathi
Izinwele ziwa: izizathu kunye neendlela zokulwa
Ukubetha ngeenwele ezide
Iimveli zezinwele zasebusika zinyamekela uElixir Ultime kwiKerastase
Iimpawu ezimnandi zefestile kunye nefestile kwi-outlet yobude obude obude
Ikhofi kunye neqhwa
I-Cocktail Inomdla nge-tsitshokolethi
I-Hugs ebomini bomntwana
Ukuba uziva uzibi, uqonda ukuba kwenzeka kakuhle
Imfundo engeyiyo embi njengengxaki yezokwelapha kunye nentlalo
Isonka se ngqolowa saseMexico